စိတ်ကူးပုံရိပ်: December 2008
တနေ့သ၌ အကျွန်ုပ် ပုံရိပ်သည် ကွန်ပျူတာရှေ့၌ တကုပ်ကုပ် လုပ်နေလေ၏။ ထိုနေ့က နေသာ၍ ရာသီဥတုကလည်း ကြည်လင် နေသောကြောင့် ပုံရိပ်သည်လည်း စိတ်လက် ကြည်သာလျက် ရှိ၏။ ထို့ကြောင့်ပင် မုန့်တီ လုပ်စား လတ္တံ့ဟူသော အကြံဉာဏ် ဖြစ်ပြီး သကာလ ရေနွေးအိုးတစ်အိုး မီးဖိုပေါ် ကောက်တည်လျက် မုန့်ဖတ်ခြောက်များကို ထည့်ထား လိုက်လေသည်။ ထို့နောက် ဗိုက်မဆာသေးပါဘူး ဟူသော အကြောင်းပြချက်ဖြင့် မုန့်ဖတ်များကို ပြုတ်ထားဆဲ ကာလ၀ယ် ကွန်ပျူတာ ရှေ့သို့ ပြန်လာပြီး ဘလောက်များကို အားကြိုးမာန်တက် ကြိုးစားပမ်းစား အားပါးတရ စိတ်ဝင်စားစွာဖြင့် ဖတ်ရှုလျက် ရှိသည်။
ဘလောက်ထဲတွင် စိတ်ပါဝင်စားသွားသည်မှာ မည်မျှကြာသည် မသိ၊ တရှဲရှဲ အသံတို့ မြည်လာသော သကာလ၌ပင် မီးဖိုပေါ်မှ ခေါက်ဆွဲအိုးကို ရုတ်ချည်း သတိရလေတော့သည်။ လှမ်းကြည့်လိုက်သော အချိန်တွင် ခေါက်ဆွဲအိုးသည် ခပ်ဖြူဖြူ အမြှုပ်တို့ တဝေေ၀နှင့် ရှိနေချေတော့၏။ ထိုအခါမှ ပုံရိပ်သည်လည်း အလျင်စလို ကမန်းကတန်း ပြေးကာ ပါးစပ်ကလည်း အမြှုပ်တို့ကို မှုတ်လျက်၊ လက်ကလည်း မီးဖိုကို ပိတ်ရလေတော့၏။ ထိုအချိန်မှာပင် နောက်ကျသွားပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရှိလိုက်ရသည်။ အကြောင်းမှာ… အင်မတန်ပင် အော်ချင်လှသော fire alarm သည်အလွန်တရာမှပင် ကျယ်လောင်လှစွာသော အသံဖြင့် အော်လျက် ရှိပြီး ဖြစ်နေသောကြောင့်တည်း။
ထိုအခါ မီးဖိုနား ရောက်နေသော ပုံရိပ်သည်လည်း အရပ်ကို ခုံနှင့် ဆက်လျက် fire alarm ကို ပြေးပိတ်ရပြန်လေသည်။ ထိုအခါမှ၊ မပိတ်ချင် ပိတ်ချင်နှင့် alarm သည် တချက်တချက် အော်ချင်လျက်နှင့်ပင် ပိတ်သွားရရှာလေတော့သည်။
ထို့နောက် မီးခိုးတို့ အလျင်အမြန်ထွက်စေရန် အတွက် ပြတင်းပေါက်များကိုလည်း ပြေးဖွင့် ရပြန်လေသည်။ ထိုခဏ၌ပင် အပြင်မှ အလစ်ချောင်းနေသော လေအေးတို့သည် အိမ်ထဲသို့ အလုံးလိုက် အရင်းလိုက် ၀င်ရောက်လာလေတော့သည်။ ချမ်းလာသော ပုံရိပ်သည်လည်း ကပ်စေးနည်းကာ လျှော့ထားသော အပူပေးစက်၏ အပူချိန်ကို ပြေးမြှင့်ရပြန်၏။ ထိုအတောအတွင်း၌ အအေး သက်သာစေရန် အနွေးထည် တစ်ထည်ကိုလည်း ပြေးယူဝတ်လျက်၊ စောင်အပါး တစ်ထည်ကိုလည်း ဆွဲလျက် ကွန်ပျူတာ ရှိရာသို့ ပြန်လာခဲ့လေသည်။ ကွန်ပျူတာရှေ့၌ ဖတ်လက်စ ဘလောက်သည် ပွင့်မြဲပွင့်လျက်။ တမုဟုတ်ချင်းပင် အကျွန်ုပ် ပုံရိပ်သည်လည်း ဘလောက်တွင် ဈာန်ပြန်ဝင်စားလျက် စိတ်ပါလက်ပါပင် ဖတ်ရှုလျက် ရှိနေလေတော့သည်။
ဖတ်ပြီး ခဏအကြာတွင် ခေါက်ဆွဲ ကျက်မကျက် စမ်းသပ်ဖို့ရန် သတိရသွားလေ၏။ အိုးထဲမှ ခေါက်ဆွဲတို့သည် အပြုတ်ဒဏ်ကို အံတုလျက် မာမြဲမာဆဲ ဖြစ်ကြောင်း သိရသောအခါ အကျွန်ုပ် ပုံရိပ်သည် အိုးထဲသို့ ရေထပ်ထည့်လျက် မီးအေးအေးဖြင့် ခေါက်ဆွဲဆက်လက် ပြုတ်လေ၏။ ဖွင့်ထားသော ပြတင်းပေါက်တို့ကိုလည်း လိုက်ပိတ်ရ၏။ အနွေးပေးစက်ကိုလည်း ကပ်စေး အပူချိန်သို့ ပြန်လျှော့ရ၏။ နေသည်လည်း အိမ်ပြင်၌ သာမြဲသာလျက် ပင်တည်း။ အားလုံး ပိုနေမြဲ ကျားနေမြဲ ဖြစ်သော အခါ အကျွန်ုပ်သည်လည်း ပုံရိပ်နေမြဲ အတိုင်း ဆာလောင်ခြင်းကို အံတုလျက်၊ ခေါက်ဆွဲအိုးကို မေ့လျော့လျက် ဘလောက်ကမ္ဘာတွင် ဆက်လက် မွေ့လျော် နေလေတော့ သတည်း။
Posted by ပုံရိပ် / Pon Yate at 08:37 12 comments:
လေယာဉ်ကွင်း…။ လူတွေ ပျားပန်းခတ်မျှ များပြားနေသည်။ ပိတ်ရက်မို့ မိသားစုဆီ ပြန်လာကြသူများ၊ မိသားစုဆီ ပြန်သွားမည့်သူများ။ အိတ်ကြီးအိတ်ငယ်နှင့် ခပ်သုတ်သုတ် လျှောက်သွားကြသူများ။ ကလေးတွေ မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင်နှင့်၊ အိတ်တွေ မနိုင်မနင်းနှင့် စုံတွဲတွေ။ ထိုင်နေရာမှ သူ လူတွေကို လိုက်ကြည့်နေဖြစ်သည်။ ချစ်သောသူ၏ လေယာဉ်က ဆိုက်မလာသေး။ လေယာဉ်ဆိုက်ရာ လိုဏ်ခေါင်းများမှ လူအတော်များများ လျှောက်လာနေကြသည်။ အေးသော ဒေသမှ လာခဲ့ဟန်တူသည်။ အားလုံး အနွေးထည်ထူထူ၊ ကုတ်အင်္ကျီလက်ကချိတ်လျက်…။
သူ့နံဘေးမှာ ထိုင်နေသော အဒေါ်ကြီး တစ်ယောက်ကတော့ သူ့သမီးကို လာကြိုသည်ဟု ပြော၏။ လေယာဉ်ကလည်း ကြာလိုက်တာနော်။ ဆိုက်သင့်နေပြီဟု စိတ်မရှည် လှစွာ ရေရွတ်နေသည်။ လေယာဉ်အခြေအနေကို ဖန်သားပြင်ပေါ်မှာ စစ်ကြည့်တော့ လေယာဉ်က စ၍ ဆင်းနေပြီတဲ့။ သူပျော်သွားသည်။ မကြာခင် လေယာဉ်ဆိုက်တော့မည်။
သူ့ရှေ့မှာ မိသားစုတစ်စု ဖြစ်ဟန်တူသော လူတစ်စု ရပ်နေကြသည်။ အမျိုးသမီးက လူလတ်ပိုင်း အရွယ်။ ၁၃နှစ် ၁၄နှစ် အရွယ် ကောင်လေး တစ်ယောက်လည်း ပါသည်။ အသက်နှစ်ဆယ် အရွယ်ခန့် အမျိုးသား တစ်ယောက်လဲ ပါသည်။ သူတို့လက်ထဲတွင် “အိမ်အပြန်ကို ကြိုဆို ပါတယ် အစ်ကိုရွိုင်ယင်” ဟု ရေးထားသော ကဒ်ထူပြားတစ်ပြား ကိုင်ထားသည်။ သူတို့အားလုံး ကြည့်ရသည်မှာ စိတ်လှုပ်ရှားနေကြသည်။ ကောင်လေးက အပေါက်ဝဘက်ကို မျှော်ကြည့်လိုက်၊ ကဒ်ပြားကို ထောင်လိုက်နှင့်။ ထိုအချိန်မှာ ပြောက်ကျား ၀တ်စုံနှင့် စစ်သားတစ်ယောက် ထွက်လာသည်။ အမျိုးသမီးက ထိုစစ်သားကို လှမ်း၍ မေးသည်။ ရှင်တို့ ဘယ်လေယာဉ်နဲ့ လာကြတာလဲတဲ့။ စစ်သားက ပြန်ဖြေသည်။ အမျိုးသမီးက သူ့ အစ်ကို (သို့မဟုတ် မောင်) ကိုလာကြိုသည်တဲ့။ ကျွန်မ အစ်ကို (မောင်)လဲ အဲဒီလို စစ်ဝတ်စုံမျိုး ၀တ်ထားတာ ဟုပြောနေသော သူ့အသံမှာ တက်ကြွနေသည်။ သူတို့ ပြောတာကို နားထောင်ရင်း ကိုယ်ပါ လိုက်ပျော်နေမိသည်။
အနီးအနားမှာ ထိုင်နေသော အမျိုးသမီး တစ်ယောက်က သူ့ညီမကို လာကြိုသည်တဲ့။ လေယာဉ်ကွင်းနှင့် သူ့အိမ်က တစ်နာရီလောက် ကားမောင်းရတာမို့ လေယာဉ်ဆိုက်ဖို့ကို စိတ်စော၍ နေ၏။ ရာသီဥတုက ဒီနေ့ သိပ်မဆိုး၍ တော်သေးသည်ဟု ပြောနေသေးသည်။ သူတို့အိမ်က ရေကန်လေးတစ်ကန် နံဘေးမှာ ရှိသည်။ တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နှင့် နေလို့ ကောင်းသော်လည်း အရာရာနှင့် ဝေးသည်မို့ မြို့ထဲ တခါထွက်ဖို့ အရေး ကားအကြာကြီး မောင်းရသည်ဟု ညည်းနေသေးသည်။
ချစ်သောသူကို လာကြိုသော သူကရော….။ သူကတော့ ချစ်သောသူကို တွေ့ရမည့် အတွက် ရင်ခုန်၏။ မျှော်ရတာကို ပျော်ပါသည်။ ဟုတ်တယ်လေ။ နှုတ်ဆက်ရတာထက် စာလျှင် မတွေ့ခင် မျှော်လင့်ရတာကို သူကြိုက်ပါသည်။
ခရီးသည် နောက်တသုတ် ခပ်သွက်သွက် လမ်းလျှောက်လာနေသည်။ အားလုံးက လိုရာခရီးကို ရောက်စေချင် နေကြသည့် အသွင်။ ဟော.. တွေ့ပါပြီ။ လူအများကြားထဲမှ သူမျှော်နေသော သူ။ ထိုင်ရာမှ ထလိုက်သည်။ ရပ်နေရာမှ မရွှေ့မိဘဲ ပြုံးပြနေမိသည်။ အနီးကပ်လာတော့ သူ့ကို လှမ်းဖက်၍ နှုတ်ဆက်သည်။ သူတို့ နံဘေးမှ စစ်သားလူငယ်ကို ကြိုနေသော လူစုမှာ ကြွက်စီ ကြွက်စီ ညံ၍ နေသည်။ သူတို့နှစ်ဦး စကားတပြောပြောနှင့် ကားဆီကို လျှောက်လာကြသည်။
ကြိုဆိုပြီးလျှင်တော့ ခွဲခွာရဦးမည်။ လေယာဉ်ကွင်း၌ ကြိုကြသည်။ လေယာဉ်ကွင်း၌ ငိုကြသည်။ လေယာဉ်ကွင်း၌ မျှော်ကြသည်။ လေယာဉ်ကွင်း၌ ပျော်ကြသည်။ နှစ်တစ်နှစ်လိုပါပဲ။ ကြိုပြီးလျှင် နှုတ်ဆက်ရမည်။ လေယာဉ်ကွင်းကတော့ သူ့တာဝန်သူ ထမ်းဆောင် နေပေလိမ့်မည်။ နှုတ်ဆက်ခြင်း အကြောင်းကို မသိကျိူးကျွံ ပြု၍ ဒီညတော့ သူပျော်လိုက်ဦးမည်။
Posted by ပုံရိပ် / Pon Yate at 01:467comments:
ရေးဖို့ အကြောင်းအရာ ခေါင်းထဲမှာ မယ်မယ်ရရ စဉ်းစားလို့ မရဖြစ်နေတယ်။ ဘာမှ မတင်ဖြစ်တာ ကြာတော့ မျက်နှာပူ လာတယ်။ (ဘလောက် ငရဲမင်းနဲ့လဲ ထပ်မတွေ့ချင်ပါ။) ဒါနဲ့ပဲ ကဗျာလေး တစ်ပုဒ်လိုပဲ အလွယ်တကူ ချရေးလိုက်ပါတယ်။ ကဗျာလို့ပဲ သည်းခံပြီး ဖတ်ပါနော်။
Posted by ပုံရိပ် / Pon Yate at 11:496comments:
အား… အခုမှပဲ နွေးသွားတော့သည်။ ဖျော်ထားသော လက်ဖက်ရည် တစ်ငုံပါးစပ်ထဲ ရောက်မှပဲ ချမ်းနေတာ ပြေသွားတော့သည်။ ခုတလော ရာသီဥတုက အေးလာပြီ။ အနွေးစက်ကို ဖွင့်သော်လည်း အမြဲတမ်းသာ ဖွင့်နေရလျှင် မလွယ်ပါ။ လကုန်တွင် လာမည့် အနွေးပေးခကို သူကြောက်မိ၏။ အင်း ချွေတာမှ။
ရေခဲသေတ္တာ ဖွင့်ကြည့်တော့ စားစရာတွေကတော့ အများကြီးပင်။ ဒါပေမယ့် တခုမှ မစားချင်တာ ခက်သား။ ခုအချိန်တွင် စားချင်သည့် အစာက အိမ်မှာ မရှိ။ ဒီလိုနဲ့ ၀ယ်ပြီး မစားဖြစ်သော အစာအချို့ အမှိုက်ပုံးထဲသို့ရောက် ကုန်သည်။ ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်ကလည်း သုံးသည့် ဈေးဖိုးမှာ လိုတာထက် ပိုများသွားခဲ့သည်။ ပြီးတော့လည်း စားစရာ မရှိဟု သူပဲ ငြီးငြူ တတ်ပြန်ပါသည်။ သူများတွေတော့ စားစရာ တကယ် မရှိလို့ ဒုက္ခရောက်နေ ရတဲ့ အချိန်မှာ ငါက ဖြစ်တာနဲ့ စားတတ်ရမှာပေါ့ဟု ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဆုံးမသည်။ အသင့်စား ခေါက်ဆွဲ တစ်ထုပ်ကို ဖောက်ကာ အရွက်များများနှင့် စားပစ်လိုက်တော့လည်း ညနေစာ တစ်နပ် ပြီးသွားသည်ပဲ။
ရေမိုးချိုး အင်္ကျီလဲပြီးတော့ လျှော်ပြီးစ ဆံပင်ကို ဘီးနှင့်ဖြီးသည်။ ဘီးက ကျိူးလုကျိုးခင်မို့ ဘီးအသစ်တစ်ချောင်း ၀ယ်ရန် စဉ်းစားမိသည်။ ဒါပေမယ့်လည်း ဖြီးလို့ ရနေတာပဲလေ။ ဘာလို့များ အသစ် လိုချင်နေရသေးတာလဲဟု ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဆန်းစစ်တော့ အသစ်လိုချင် နေသောစိတ် လျော့ကျသွားသည်။
အေးအေးရှိသည်မို့ အနွေးထည် ထူထူတစ်ထည် လိုက်ရှာမိသည်။ စုတ်သော်လည်း ထူသော အနွေးထည် တစ်ထည် ဗီရိုအောက်ဆုံးထပ်မှ ထွက်လာသည်။ အထက်တန်းလောက် ကတည်းက ၀တ်ခဲ့သော ကိုယ့်အကြိုက်ဆုံး အနွေးထည် တစ်ထည် ဆိုတာ သတိရသွားပြန်သည်။ ချွေတာရေး လုပ်ပြီး အ၀တ်အစား မ၀ယ်ဘဲ နေဖို့ ကြိုးစားခဲ့သည်မှာ ကြာပြီ။ အောင်မြင်သင့် သလောက် အောင်မြင်သော်လည်း စိတ်လွတ်သွားသည့် အခါမှာတော့ တစ်ထည်လောက် ၀ယ်ဖြစ်တတ်သည်။ လျော့ဈေးချတိုင်း မ၀ယ်နှင့်၊ တန်တယ် ထင်တိုင်း မ၀ယ်နှင့်။ မလိုဘဲနှင့် မ၀ယ်နှင့်။ ဒီလို သတိထားမိလျှင် ကိုင်ပြီးသော အကျီင်္ ပြန်ချဖြစ်သွားသည်။ အင်း ဒီလိုတော့လည်း ဟုတ်နေသား။
ထိုင်ခုံပေါ်ထိုင်ရင်း စောင်မထူမပါး တစ်ထည်ကိုလည်း ဆွဲခြုံမိသည်။ နိုဗယ်ဆု ရသွားသော သမ္မတဟောင်း ဂျင်မီကာတာတောင် အိမ်ထဲမှာ နေလျှင် အနွေးထည် တစ်ထည် အမြဲ ၀တ်ထားသည်ဆိုပဲ။ အနွေးပေးရ သက်သာအောင်၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းမှု သက်သာအောင်၊ စသည်ဖြင့် ကြားဖူးတာပဲ။ သမ္မတတောင် အနွေးထည် ၀တ်နေတယ် ဆိုတော့ ကိုယ်ကလည်း အားကျမခံ အနွေးထည်ရော၊ စောင်ပါ ခြုံနေလိုက်မည်။ ဒီလိုဆို ချွေတာရေးလည်း ဖြစ်ရာကျ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်း ညှာတာရာ ကျပေမပေ့ါ။
ရှေ့မှာ မြင်နေရသော ကွန်ပျူတာကို ဖွင့်မည်လုပ်သည်။ အလုပ်မှ ပြန်လာကတည်းက အိပ်ချိန်အထိ ကွန်ပျူတာရှေ့ ထိုင်တတ်သည်မှာ ကိုယ့်အကျင့်လို ဖြစ်နေပြီ။ ဘလောက်တွေ လိုက်ဖတ်သည်။ ပို့စ်အသစ် ရေးဖို့ ကြိုးစားသည်။ ကွန်ပျူတာသုံးချိန် နည်းနည်းလျော့လျှင် ကိုယ့်ချွေတာရေး အစီအစဉ်လေးကို အထောက်အကူ ဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်….အင်း…. အင်း…. ဘယ်လောက်များ စုမိသွားမှာ မို့လို့လဲ။ ဒါတော့ လာမပြောနဲ့။ ချွေတာနိုင်ဘူး။
Posted by ပုံရိပ် / Pon Yate at 08:587comments: